बच्चालाई जथाभावी औषधि खुवाउँदा मिर्गौला बिग्रन सक्छ (भिडियोसहित) – Ishan Hospital
डा. मो. फिरोज अंजुम
सामान्यतया धेरैले मिर्गौला रोग बुढेसकालमा अर्थात उमेर अलि बढी भइसकेपछि लाग्ने रोग हो भनेर बुझ्ने गर्छन्। तर मिर्गौलाको रोग जोकोहीलाई र जुनसुकै उमेरमा पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । पछिल्लो समय उमेर भएकालाई मात्र हैन् बच्चा उमेरमै मिर्गौलामा समस्या भएका बालबालिका अस्पताल आउने क्रम बढेको छ । हुनत नेपालमा कति बालबालिकामा मिर्गौलाको समस्या छ भन्ने एकिन तथ्यांक छैन् तर पनि पाटन अस्पतालमा आउने बच्चाहरुलाई लिएर अध्ययन गर्दा ४ देखि ६ प्रतिशत बालबालिकामा मिर्गौलाको कुनै न कुनै समस्या भएको देखिएको छ । यसले पनि के आंकलन गर्न सकिन्छ भने बालबालिकामा मिर्गौलामा समस्या उच्च छ तर सबैले सही र समयमै उपचार भने पाउन सकिरहेका छैनन्। बच्चाको मिर्गौला जोगाउनका लागि बाबु आमाले बच्चा सानै हुँदादेखि विशेष ख्यान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
खासगरी बच्चाको मिर्गौला बिगार्ने पहिलो कारण भनेको बारम्बार पिसाबमा संक्रमण हुनु हो । यसरी संक्रमण हुँदा बच्चालाई ज्वरो आउने, पेट दुख्ने, छिटो छिटो पिसाब आउने, वान्ता हुने हुनसक्छ । यो समस्यालाई सामान्य ठानेर धेरैले औषधि पसलबाट औषधि किनेर ल्याएर खुवाउने गरेको पाइन्छ । यसरी संक्रमणबारे सचेत नहुँदा हरेक पटक यस्तै औषधि खुवाउँदा अन्तत: बच्चाको मिर्गौाला फेल गराउनसक्छ । त्यसैले बच्चालाई माथि उल्लेख गरिएका लक्षण देखिएमा कतै मिर्गौलाको समस्या त हैन भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ ।
बच्चाको मिर्गौालामा समस्या गराउने अर्को कारण भनेको ‘अब्स्ट्रक्टिभ यूरोप्याथी’ हो । यसमा बच्चाको मिर्गौलादेखि पिसाब नलीसम्म केही ब्लक हुनसक्छ । यसरी ब्लक हुँदा पिसाब राम्ररी नहुने, भए पनि थोपा थोपा गरेर आउने समस्या हुनसक्छ । यसमा पेट फुल्न थाल्छ । यसले समयमै उपचार नपाउँदा मिर्गौला फेल सम्म गराउनसक्छ ।
त्यसैगरी नेफ्रोटिक सिन्ड्रोमको समस्याले पनि बच्चाको मिर्गौला बिग्रन सक्छ । यसमा पिसाब कम हुनु, जीउ सुन्निनु, ज्वरो आउनु जस्ता समस्या हुनसक्छन्। यसलाई पनि समयमै उपचार गरेर ठीक पार्न सकिन्छ । माथिका यी समस्यामा ख्याल गरिएन भने मिर्गौला फेल हुनपुग्छ । मिर्गौला एकपटक फेल भइसकेपछि यसको दुईवटा मात्र उपचारको विकल्प छन्। डायलाइसि र मिर्गौला प्रत्यारोपण। दुवै विधि अत्यन्त झन्झटिलो र महंगो छन्। अहिले त नेपालमा बच्चाको मिर्गौलासम्बन्धी रोगमै विशेषज्ञता गरेर डाक्टर आएका छन्। उनीहरुसँग परामर्श गर्न सकिन्छ ।
Source :- https://healthtvonline.com/thoughts/2021/04/35021/?fbclid=IwAR1L-aHE–cm1Wwm1pMpblgtKln3BJQQhZYB8fETiglGvYDrXYySJJfS5mY